23rd November 2018, 07:04 pm | ७ मंसिर २०७५
तिहारको केही दिनअघिमात्र निधन भएका पद्मरत्न तुलाधर २०३८ साल ताका लाजिम्पाटमा रहेको आफ्नै छापाखानाबाट नेपालभाषाको दैनिक पत्रिका 'राजमति' चलाउँथे। पत्रिकामा एउटा स्तम्भ थियो - ‘प्रतिभा परिचय’।
चार वर्ष भारतमा पढेर आएका नमीता र सुनीता स्मार्ट थिए। अङ्ग्रेजी राम्रोसँग बोल्ने पनि। ठमेलको अमृत साइन्स क्याम्पस पढ्दै गरेका उनीहरुका बारेमा छापिएको सामग्री धेरैका लागि प्रेरणाको स्रोत पनि बन्थ्यो। तर, केही आपराधिक मानसिकता भएका 'आवारा'हरुका लागि पत्रिकामा छापिएको त्यही विवरण सिकारको आधार बन्यो।
माधवराज भण्डारीको घर लाजिम्पाट। घर नजिकै थियो – शंकर होटल। होटलका संचालक राम श्रेष्ठ राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यसमेत थिए। उनका छोरा विनोदशंकर भने त्यतिखेर 'आवारा' मानिन्थे। 'त्यो पत्रिका शंकर होटलमा पनि पुग्थ्यो,' नमीता सुनीता काण्डमा लामो अनुसन्धान गरेका पत्रकार किशोर श्रेष्ठ भन्छन्, 'सबै कुराले केटीहरू नोटिसमा भए। यिनीहरुलाई शिकार बनाउनु पर्छ भनेर प्लान बनाएर लागेको हुनुपर्छ।'
‘जेठ १६ गते दुईजना केटाहरू काठमाडौंबाट नमिता, सुनिता, नीरा (पराजुली) आएकै बसमा आए। बाटोमा ती केटीहरूलाई बिस्कुटहरू पनि दिँदै, पोखरामा कहाँकहाँ घुम्ने – कहाँ बस्ने – सोध्दै आए,' ओलीले लेखेका छन्, '१७ गते उनीहरू बसेको ठाउँ वरिपरि टहल्लिएर फर्किएका पनि थिए।'
न मोबाइल, न सामाजिक सञ्जाल, न अहिले जस्ता मिडिया- सञ्चारका साधन कम भए पनि काठमाडौँबाट गएका तीन किशोरीहरु पोखरामा हराएको खबरले काठमाडौँमा सनसनी फैलिसकेको थियो। सरकारी सेवाका प्रभावशाली कर्मचारीमात्र हैन, तत्कालीन अर्थमन्त्री यादवप्रसाद पन्तका सम्धीसमेत भएकाले नमीता-सुनीताका बाबु माधवराजले छोरीहरु खोज्नका लागि निकै 'पावर' लगाए।
हराएको पाँच दिनपछि सेती नदीको किनारमा एउटा लाश फेला पर्‍यो। टाउको पूर्व फर्किएको र शरीर उत्तानो अवस्थामा। प्याजी रङ्गको पाइजामा (पञ्जाबी पोशाक) थियो भेटिएको शरीरमा। कम्मरमाथि लगभग निर्वस्त्र। शवको घाँटीमा झुण्डिरहेको ब्याग, दुवै दिदी–बहिनीका परिचयपत्र, सुनको लकेट फेला परेपछि माधवराजले सनाखत गरे - कान्छी छोरी नमीता।
'सुनीताको लाश नदीको छेवैमा फेला पर्दा उनको शरीरमा सुरुवाल थिएन, अण्डरवेयर दोब्रिएको थियो, घाँटीमा कालो (सल) चुनीले बेस्कन कसिएको थियो। छेवैमा लामो बाँस थियो,' किशोर श्रेष्ठ आफ्नो पुस्तकमा लेख्छन् - 'यसले के पुष्टि हुन्छ भने सुनीतालाई घटनास्थलबाटै उठाएर लगी कतै सामूहिक बलात्कार गरियो। पोल खुल्ने डरले उनकै चुन्नी (कुर्ता, सुरुवाल लगाउने केटीहरुले घाँटीमा प्रयोग गर्ने पातलो कपडा) ले घाँटी कसेर हत्या गरियो। हत्यापछि लाशलाई बोकेर ल्याई थपक्कसँग त्यहाँ राखियो। अथवा यसो पनि भन्न सकिन्छ, लाश त्यसरी राखेर अपराधीहरुका तर्फबाट सुनीताका अभिभावकमाथि ‘दया’ देखाइयो।'
'सुनीताको शवको पोष्टमार्टम रिपोर्टमा सिभिल सर्जन डा. कुमार समशेर र मेडिकल अफिसर बृजकिशोर प्रसादले लेखे – ‘घाँटीलाई दोपट्टाले बेरी श्वास लिन नदिएर मारेको देखिन्छ।’
पृथ्वीनारायण क्याम्पसमुनि सेती नदीको खोंचबाट निकालिएको नमीताको शव र त्यसको प्रकृति हेर्दा घटना नजिकै कतै भएको अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो। वारि क्याम्पस र पारी फूलबारी। फूलबारीबाट लाश भेटिएको ठाउँ प्रष्टसँग देख्न सकिन्थ्यो। फूलबारी डुल्ने क्रममा असार ३ गते माधवराजले एउटा महत्वपूर्ण सूत्र पाए - वनपाले चूडामणि अधिकारी।
सुनीताको लाश भेटिएको ६ दिनपछि असार १२ गते रामघाटमा अर्को लाश फेला पर्‍यो। त्यो लाश उही वनपाले चूडामणि अधिकारीको थियो। श्रीमती टीकादेवीले एकफेर लाश हेर्न पाइन्। किशोर श्रेष्ठको पुस्तकमा उल्लेख छ - 'लोग्नेको हातको बूढी औंला भाँच्चिएको थियो, कोखामा एक रुपैयाँ (डबल) जत्रो प्वाल थियो, खुट्टामा एउटा चप्पल थियो, भर्खरै हातमा बाँधेको डोरो पनि केही भएको थिएन, शरीरचाहिँ कालै भइसकेको थियो।'
केन्द्रीय गुप्तचर विभागका मुख्य अधिकृत चाँदबहादुर राई र अञ्चलाधीश गणेशमान श्रेष्ठ ‘राम्रोसँग’ पोष्टमार्टम गरिदिने अनुरोध लिएर चिप्लेढुङ्गास्थित डा. कुमारको क्लिनिकमा गए। नमीता–सुनीताको पालामा झैं यसपटक पनि डाक्टरले भोलिपल्ट पोष्टमार्टम गर्ने भन्दै राई र श्रेष्ठलाई फर्काइदिए। भोलिपल्ट - ‘कुहेको, तिघ्रा भाँच्चिएको र आन्द्राभूँडी नभएको हुनाले पोष्टमार्टम गर्न नसकिएको’ भनियो।
प्रतिध्वनि साप्ताहिकका रिपोर्टर किशोर नेपाल घटनाको स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न घटनालगत्तै पोखरा पुगेका थिए। त्यहाँ स्वतन्त्र भएर रिपोर्टिङ गर्न सजिलो थिएन। 'रिपोर्टिङ गर्न म जहाँ-जहाँ जान्थेँ, उनीहरु चारैतिरबाट घेर्थे। पिटपाट गरौँला झैँ गरेर प्रस्तुत हुन्थे,' घटनाबारे नेपालले बताए, 'तँ किन आइराको यहाँ भन्थे। यहाँ कसैले केही गरेको छैन, पोखरा सुरक्षित ठाउँ हो भन्थे।'
नेपालका अनुसार त्यतिबेला पोखरा पुग्नै कठिन थियो। मुग्लिङ पुग्नै दिनभर लाग्थ्यो। त्यहाँबाट पनि पोखरा अझै टाढा। 'रिपोर्टिङमा जाँदा त्यहाँका केही मानिसले मलाई नै खेदे,' उनले भने।
'पब्लिसरलाई पनि अप्ठेरो परेको जस्तो लाग्छ त्यतिबेला,' नेपाल सम्झिन्छन्।
उनले त्यहाँका स्थानीय साथीहरुसँग बुझे। 'उनीहरुले मलाई भने - हेर बाबु, यो पत्ता लाग्दैन। पार लाग्दैन,' नेपालले भने। त्यसपछि उनी पोखराबाट फर्किए।
घटनाको १० वर्षपछि यही विषयमा खोजी गर्न अर्का पत्रकार पोखरामा उत्रिए। उनको नाम पनि किशोर नै थियो - किशोर श्रेष्ठ। घटना हुँदा उनी चार कक्षामा पढ्ने १२ वर्षका।
'आजैजस्तो लाग्छ यो काण्डमा संलग्न ठूलाठालूहरुमाथि कारबाहीको माग गर्दै स्कूले हामी भुराहरुले बजारभरि वालिङ, पोष्टरिङ गर्दै हिँडेको,' उनी सम्झन्छन्।
हाल प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष रहेका किशोरले पुरानो कुरा सम्झँदै भने, '२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजा र राजदरबारबारे पनि केही लेख्न सकिने भयो। त्यसपछि अब केही त गर्नुपर्ने भयो भन्ने लाग्यो। सोच आयो क्राइममा नै केही लेख्नुपर्छ। पुराना घटना के भएका रहेछन् भनेर हेर्न थालेँ। एउटा घटनाले क्लिक गर्‍यो - नमीता-सुनीता हत्या प्रकरण।'
उनी भन्छन्, 'घटना हुँदा अञ्चलाधीश गणेशमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँबाट केही जानकारी लिएँ। गुप्तचर लगायत घटनामा जोडिएका व्यक्तिलाई भेटेँ। कुमार उपाध्याय लगायत पुराना मानिसहरुलाई भेट्दै गएँ।'
हरेक हप्ता नमीता-सुनीता हत्याकान्डबारे उनका खोजमूलक समाचार दृष्टिको एउटा पूरा पेजमा छापिन्थ्यो। यसैबारे उनले 'दरबार कान्डपछि दबाइएको अर्को हत्याकान्ड' पुस्तक लेखे, जसले यो घटनालाई विस्तारमा लिपिवद्ध गरेको छ।
'ती राँ*हरु मर्दा के! राँ*हरुको चिलाउँदा हाम्रो सिडिओको सरुवा भयो'
नमीता - सुनीता हत्याकान्डबारे जानकारी दिने अर्को एउटा पुस्तक पनि छ सूर्यबहादुर सेन ओलीको आत्मकथा। घटनाको तीन महिनापछि कास्की जिल्लाको सिडिओलाई सरुवा गरेर उनलाई पठाइएको थियो। खटिएको भोलिपल्ट सरुवा हुन लागेका सिडिओ पद्मराज सुवेदीसँग विन्दवासिनी मन्दिर दर्शन गर्न जाँदा त्यहाँका पूजारी रुद्रनाथ बाहुनले भनेको भन्दै उनको आत्मकथामा उद्धृत गरिएका शब्द हुन् माथिका। उनले आत्मकथामा लेखेका छन्- 'यसैबेलादेखि नमीता-सुनीताको हत्यामा त्यस बाहुनप्रति मैले अनुसन्धान सुरु गरेँ।'
ओलीले आत्मकथामा पोस्टमार्टममाथि प्रश्न गरेका छन्। शव बरामद गर्दाको प्रहरी मुचुल्का र अस्पतालको पोष्टमार्टम प्रतिवेदन बाझिएको उनको दावी छ। उदाहरणसहित उनले लेखेका छन् –
'प्रहरीको प्रकृति मुचुल्कामा सुनीताको योनीबाट रगत निस्केको, च्यातिएको भन्छ भने पोष्टमार्टमले माछाले खाएको भन्छ। खाएको माछाले नै हो भन्ने डाक्टरलाई थाहा हुने कुरा हैन! साथै, माछाले खाएको भए मृत्युपछि खाएको हुनुपर्छ र मृत्युपछि खाएकोमा रगत आउनुपर्दैन।'
'चूडामणिको प्रकृति मुचुल्कामा काखीमुनि एकातिर पाँच पैसा छिर्ने प्वाल अर्कोतर्फ लोटा छिर्ने भ्वाङ्ग भन्छ भने, पोष्टमार्टममा गिद्धले खाएको भ्वाङ भन्छ। गिद्धले नै खाएको भन्ने डाक्टरले थाहा पाउने कुरा हैन। साथै, शवको शरीरको अन्त पनि गिद्धले खाएको हुनुपर्ने – छैन।'
त्यही क्रममा उनलाई फोनबाटै अपरिचितले धम्क्याए। उनले लेखेका छन्, 'बिहान ६ बजे नै फोन आयो – कहाँ कताबाट को बोलेको भन्ने परिचय नदिइकन भन्यो – ‘सिडीओ हो?’
उसले ‘ए। तँ सिडीओ, फूर्ती नगर है तैँले, जे गरिस्, यत्तिमा बस। अरू अगाडि बढिस् भने तेरो या त यहाँ बसाइ छैन, या खैरियत छैन। कुरो आफै बुझ। अगाडि नबढ !’ भन्यो।'
'सबै अध्ययन गरेपछि मैले शङ्काको घेरा नम्बर एक, दुई, तीन भनेर लेखेँ। त्यतिखेर अहिले जस्तो फोन ट्रयाकिङ, फिङ्गर प्रिन्ट, डिएनए गर्ने अवस्था थिएन। जे देखियो, त्यो अनि मानिसको बयान र सर्कम्सटेन्सेजहरुका आधारमा लेखेँ,' श्रेष्ठले त्यतिखेर रिपोर्टिङ गर्दाको अवस्था सम्झिए, 'यस्तो काम ठूलो ग्याङ नभई सम्भव छैन भन्ने लाग्यो। सीधै प्वाइन्ट आउट गर्न सकिने स्थिति थिएन तर जति सकियो, मैले निष्पक्ष हिसाबले न्याय गर्ने हिसाबले लेखेँ।'
‘त्यतिबेला ज्यान जोगाएर हिँड्न मुस्किल थियो। टेलिफोनमा कलर आइडी (टेलिफोनमा कल गर्नेको नम्बर देखिने प्रविधि) थिएन। थर्काउँदै ल्यान्डलाइनमा फोन आउँथ्यो घरमा। उनलाई फोनमा भन्थे, 'आज थापाथली पुल कट्न पाउँदैन, दाउरा ठीक पारेर राख।'
'अफिसमा फोन गरेर कति बेला आउने कति बेला जाने सबै हामी वाच गरिरहेका छौँ भनेर धम्की आउँथ्यो। सानैदेखि अखिलको राजनीति गरेकाले जेल पर्न पनि डर नमान्ने भएकोले मरे मरिन्छ भन्ने लागेर मात्रै हो,' उनले भने। उनीमाथि शारीरिक रुपमा आक्रमण त भएन तर हतोत्साही पार्ने प्रयास ज्यादै भयो।
सूर्य सेन ओलीले आत्मकथामा घटनामा शंकाको घेरामा रहेका नीर शाहलाई 'क्लिन चिट' दिएका छन्। तर, किशोर श्रेष्ठले भने शाहमाथि शंका गर्न छाडेका छैनन्।
एउटा सानो प्रसंग उनले हामीसँग सेयर गरे -
'सम्भावित शंकाको पात्रमा नीर शाहको नाम पनि थियो। उहाँसँग पनि इन्टरभ्यु लिनपर्‍यो भनेर नेपाल टेलिभिजनको सिंहदरबारमा रहेको अफिसमा पुगेँ। मैले तपाईँ त्यति बेला कहाँ हुनुहुन्थ्यो? भनेर सोधेँ। उहाँले म 'स्मृतिको पर्खाल' भित्र नाटक गर्न जमलमा थिएँ भन्नुभयो।
मैले फोटो देखाएर सोधेँ यी केटीहरूलाई चिन्नुहुन्छ?'
'उहाँले चिन्दिनँ भन्नुभयो।'
'नीर जी, तपाईँ त्यहाँ जानुभएको रहेछ त। चिनजान रहेछ त। तपाईँले त चिन्दिनँ भन्नुभयो' भनेर मैले प्रश्न गरेपछि उहाँ अक्मकिनु भयो।'
'त्यति बेला कुनै सबुत प्रमाण देखिने नहुँदा नहुँदै पनि को-को मान्छे संलग्न हुनसक्छन् भनेर नोटिस गर्ने गरी केस बाहिर आयो भने अहिले त यति प्रविधि हुँदाहुँदै पनि कुहिरोको काग जस्तै भइएको छ,' नमीता, सुनीता प्रकरणको अनुसन्धानमा लामो समय खटिएका किशोर श्रेष्ठ भन्छन्, 'निर्मलाको केसमा सरकार र सुरक्षा संयन्त्र मात्र होइन, मिडिया पनि फेलियर भएको छ।'
नोट : निर्मला प्रकरणमा अहिले के भइरहेको छ? किन प्रहरी अपराधीसामु पुग्न सकेका छैनन्? यस प्रकरण सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्टहरुको शृङ्खला भोलिदेखि पहिलोपोस्टमा प्रकाशन हुनेछ।